Izipho zezingane ezisanda kuzalwa. Amathiphu namasu
Ukuzalwa kwengane kungenye yezenzakalo eziqhakazile, ezijabulisayo nezilindelekile ekuphileni komndeni ngamunye. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi izihlobo nabangane abaseduze bafuna ukuhlanganyela nale njabulo nabazali abasanda kuzalwa, abajabula ukuveza imizwa yabo ngosizo lwezipho zengane esanda kuzalwa. Uhlobo luni lwesipho kumntwana osanda kuzalwa?
Nanka amathiphu namasu:
Izipho eziwusizo zengane
Uhlu lwezipho ezithandwayo kakhulu ngesikhathi sokuzalwa kwengane zisho izinto ezinjalo njengezembatho, amabhodlela, izinsipho, izindiza kanye nokuhlelwa kwezinsana. Futhi lokhu akuyona into embi, kodwa kunamathuba aphezulu ukuthi lezi zipho ziyoba uhlobo olufanayo futhi ngeke ziwusizo njengoba ungathanda (ngemva kokusetha zonke izinsana eziyishumi kuzoba ukucinga). Ngakho-ke, kungaba ngcono kakhulu ukuvuma ngaphambili (ngezihlobo okungenani eziseduze) uhlu lwezipho. Kuhle ukufundela kubazali ngokwabo ukuthi yini abayidingayo kakhulu okwamanje, ngoba indlela yokukhetha izipho iyinto engcono kakhulu.
Ama-ruble ayi-100 ahle, i-a1000 ingcono
Uma kukhona isifiso sokunikeza isipho esibizayo (isibonelo, umqhubi omkhulu wesimanje, isikhulu esihle, ingane yokuqapha noma ukubethelwa okuphuthumayo kakhulu namuhla), ngoba imali, ama-alas, akwanele, ungayithenga emkhombeni, ukuhlanganisa imizamo kanye namakhono ezinkampani zabantu abaningana.
Izipho zokudala, noma izipho zamabantwana ezitholayo zinezandla
Uma kunesikhathi kanye namakhono, ungenza okuthile (ukuthunga, ukubopha) ngomntwana ngezandla zakho. Isipho esinjalo siyobe sithwala amandla futhi kuzoba ubufakazi obengeziwe bokuthi lo mntwana usho okuningi kuwe.
Uma ukucabanga kwakho kunganele, ungakwazi ukuboleka imibono yokudala kusuka ku-intanethi. Enenethiwekhi kunezinsiza eziningi ongathola ngazo izinyathelo ezinemininingwane ngokulandelana ngokudala izipho zokudala. Lokhu kungaba amafoni omakhalekhukhwini anembala afakwa phezu kokulala komntwana, nezintambo ezenziwe ngezandla zokugcina ezinye izikhumbuzo ezihambisana nomntwana othandekayo (umaki ovela esibhedlela, i-curl yokuqala, okuyizingalo zokuqala, njalonjalo). Isipho esinjalo sokuzalwa komntwana osanda kuzalwa sizogcinwa isikhathi eside kakhulu, bese-ke, siwela emkhakheni wokubukwa, kuzohlale kudala imizwelo emihle kuphela.
Izipho zabazali bomntwana osanda kuzalwa
Ngokuvamile, zonke izipho eziletha umntwana osanda kuzalwa zenzelwe yena. Kodwa abazali abasha, ngokungangabazeki, nabo bayojabula kakhulu, uma benakekelwa kancane. Umama osemusha, osukwini lwangempela okudingeka abe nakho okuningi, uzothola injabulo yangempela yesipho esenziwe kuye ngokwakhe. Kungaba into evela eziqhumini (uma umnikezi eyazi ukuthi uyathandwa kangakanani futhi uyithandani) noma uhambo olukhokhelwe ukuya enhle salon, lapho umama azokhumbula ukuthi, naphezu kokulala kokulala nokukhathazeka, usengumfazi okhangayo. Ngakho-ke, isipho esinjalo seMamenovorozhdennogo, esingakhohlwa ukuziqapha, kuzodingeka sibe njengengamukeleki ngangokunokwenzeka.
Ungakwazi futhi ukunikeza abazali bezingane ukuvakasha kwezimpelasonto, kodwa kuphela kulawo maholide noma izindlu zokugibela lapho kukhona amakamelo ahlomiselwe imindeni enezingane. Futhi uma ngalesi sikhathi ukuqasha i-nanny yamahora angu-24 ukusiza ekunakekelweni kwengane, isipho esinjalo nhlobo singabizwa ngokuthi yinkosi.
Ungesabi ukuveza umbono wakho, ukhethe isipho kulabo abasanda kuzalwa noma abazali bakhe. Into eyinhloko okufanele uyikhumbule ukuthi kufanele unikezwe inhliziyo ehlanzekile futhi ngaphandle kokuzisola.
Futhi yisiphi isipho osinika intombazane noma umfana osanda kuzalwa?
Imibono engavamile yoNyaka Omusha
I-suitcase enkulu enezinsiza eziningi
Indlela yokukhetha ingubo efanele
Ungasusa kanjani ama-stain aphuzi ngokuthuthumela kusuka ezingutsheni?
Indlela yokufunda ukulondoloza ezitolo zokuthengisa
Iseluleko esihle sokuvuka ekuseni
Indlela yokugeza inkino nge jeans
Iresiphi yamapheya amnandi ku-batter ngaphansi kwe-caramel ekhanda
Imfundo yezingane ezweni lanamuhla
Hlela i-limousine yomshado
Itiye ewusizo kakhulu
Ikhodi yezimiso lapho uxhumana nomphathi
Indlela yokufundisa ingane ukutshela ngesithombe
Ukuhlunga, izimbisi kanye nobuso be-lotions kusuka ku-dill
Anastasia Vertinskaya: impilo yomuntu siqu
Inyama nge ushizi
Ikhadi leposi ngoFebhuwari 23, zinezandla, isigaba somsebenzi nesithombe
Indlela yokusiza umuntu odlala ukugembula
Ukwazi kanjani ubulili bomntwana ngezibonakaliso?
Ngokuqondile ekuhlosweni: I-Chanel Le Lift Amafutha okhilimu ama-reparatrice esikhumba esikhulile